Zoom App Dhawunirodha yeJio Runhare [Instant Download] - Luso Gamer
Zoom App Dhawunirodha kweJio Runhare [Kurumidza Kukodha]
Dai 12, 2021 March 21, 2021 by Shweta Tripathi
Quarantine kana kuti kwete. Kunyangwe chirwere kana kusavapo kwacho. Kufona kwevhidhiyo zvava chave chinhu chinodiwa. Saka kana iwe uri weJio foni mushandisi, pano isu totsanangura nzira yeZoom App download yeJio Foni.
Mukumuka kwedenda, tiri kuenda munguva dzisina kumboitika. Hupenyu hwave kutenderera. Rusununguko rwekufamba uye kufamba-famba rwatakatora kure kure kwave kuita hwomutambarakede.
Mumamiriro ezvinhu akadai, hazvigoneke kugara kure nebasa, wakasarudzika mukona yekamuri uchitya hutachiona hunopararira.
Ichi chikonzero nei mabhizinesi nemahofisi vachiuya nedzimwe nzira dzekuita kuti mabasa avo afambe zvakanyatsonaka sezvinobvira. Mune mamiriro ezvinhu aya, kushandiswa kwemusangano nemavhidhiyo maficha yave nzira yakajairika yekushanda, misangano, uye hurukuro.
Kana iwe uri kushandisa Jio Runhare muIndia. Iwe unogona kuwana zviri nyore kubatana kune vaunoshanda navo kana vamwe vadiwa kuburikidza nevhidhiyo yekusvitsisa maapurogiramu akadai Zoom App Isu tichakupa maitiro uye masosi kuti uwane.
Zoom App Download yeJio Foni: Maitiro ekuita sei?
Zoom App ndeye renhare pamwe nePC. Unogona zvakare kurodha nekuisa iyi application pane yako Jio foni. Uchishandisa unogona kubatana nemisangano nevatori vechikamu kusvika kune vanhu zana.
Nechaunga chakadai iwe unogona kuona yakachena-yakajeka, mhando yepamusoro, kutarisana nekutarisana kumeso, uye kutora chikamu mairi. Panguva imwecheteyo kugovera skrini yako uye kutaurirana kuburikidza ne-mu-app kutumira pakarepo.
Zo-App yekukunda Zoom App pafoni yeJio inogona kushandiswa kumisangano yepamhepo, musangano wevhidhiyo, uye kutumira mameseji eboka uchishandisa iyi application imwechete.
zita Zoom Cloud Kusangana
Package Zita us.zoom.videomeetings
Inodiwa Android 5.0 uye Pamusoro
Zvimiro zveZoom App
Ichi chishandiso chakanyanya pakati pezvose zvinoshandiswa zvemhando yacho. Iwe unogona kunakidzwa nezvinotevera zvinotevera kamwe Zoom App download yeJio foni yakwana.
Yakanakisa kugovana screen
Govana skrini zvakananga kubva kune yako Jio smartphone.
Screen share mifananidzo, mawebhusaiti, Google drive, mabhokisi mafaera, uye dropbox, kana mamwe magwaro.
Tumira muzvinyorwa zvakawanda, mifananidzo, uye maodhiyo faira kubva kunharembozha yako yeJio zvine tap.
Ratidza mamiriro ekuwanika.
Iwe unogona kukoka ako mafoni mafoni kana email email.
Iwe unogona kutora chikamu sevateereri kana semukurukuri anoshanda
Inoshanda pane ese internet kubatana kusanganisira 3G / 4G kana WiFi kubatana.
Iwe unofanirwa kupa kuverenga kune kutevera Shandisa yakazara chinyorwa cheJIO Vashandisi vefoni.
Mahara Moto Moto muJio Nhare
Maitiro ekuDhaunirodha Zoom App yeJio Nhare
Pane nzira mbiri dzekuodha iyi application. Imwe yakananga kubva kuGoogle play shop uye imwe yacho senge APK faira iyo inogona kuzonyorwa kuiswa paJio mobile. Heano maitiro ekuirodha kubva kuGoogle Playstore.
Enda kuGoogle Play Store (Batanidza panoperera chinyorwa)
Tsvaga iyo Zoom App kuburikidza nebha yekutsvaga iri pamusoro peji.
Tinya kana kudzvanya pane yekuisa sarudzo
Kamwe maitiro acho apera, iwe unogona kuwana iyo app icon pane yako Jio foni skrini. Ingo tora kuti uvhure uye ubatanidze ipapo.
Maitiro Ekuita Zoom App APK Dhawunirodha yeJio Nhare
Izvi zviri nyore senge maitiro ekurongedzera kumisikidza. Pano iwe uchafanirwa kupfuura kuburikidza mashoma ekuwedzera matanho uye nekuisa iyo app manually. Isu tichatsanangura maitiro nenzira. Unofanira kungoita zvinoenderana nenhamba dzinoratidzwa nenhamba.
Nhanho yekutanga ndeyekuodha iyo APK faira. Nezve izvo, iwe unofanirwa kudzvanya kana kubaya pane bhatani 'Dhawunirodha APK' pazasi.
Izvi zvichatanga kuita mukati megumi-nepiri nguva (zvichienderana nekumhanya kwako kwewebhu).
Kana maitiro acho apera, tsvaga iyo faira ye APK pane yako renhare mbozha uye tora pairi.
Pano iwe unogona kukurudzirwa kugonesa iyo isingazivikanwe Source sarudzo. Iwe unogona kuita izvo kubva kune kuchengetedza zvigadziro.
Wobva wapeta mashoma mashoma dzimwe nguva, uye iwe unenge uri kumagumo ehurongwa hwekuisirwa.
Izvi zvinopedza matanho ekuisa. Iwe unogona ikozvino kushandisa Zoom yevhidhiyo mafoni uye kutaurirana.
Zoom app download yeJio foni inoda matanho ari nyore ekutevedzera. Ipapo iwe unokwanisa kunakidzwa neese maficha ayo anodadisa iyi programu inodadisa. Kuti uwane Zoom APK yekubaya iyi link pazasi kana iwe unogona kuenda zvakananga kuGoogle Play Store nekutora iyo yechipiri yekubatanidza.
Roposo App Download MuJio Runhare [Kuiswa Kwechinyorwa]
Mahara Moto Moto muJio Runhare [100% Kushanda]
Jio Runhare Fingerprint Lock App Apk Download For Android
Categories Blog, Apps Tags Zoom APK, Zoom App, Zoom App Kurodha kweJio Nhare Post navigation
U Vhidhiyo Apk Dhawunirodha for Android [App Like TikTok]
Prime Injector Apk Dhawunirodha Android [ML Skins]